Xisbiga Miljöpartiet oo hor u kac sameeyay | Somaliska
Xisbiga Miljöpartiet oo hor u kac sameeyay
Xisbiga deegaanka ee Miljöpartiet (MP) ayaa hor u kac weyn ka sameeyay xaga codbixayaasha. Shirkada SIFO oo si joogto ah baaritaan ugu sameysay sida ay noqon karto doorashada soo socota ee Sweden ayaa soo bandhigtay in xisbiga Miljöpartiet uu hada haysto 12.3% taasoo ah hor u kac weyn marka la eego tiradii ay heleen doorashadii la soo dhaafay oo ahayd 7.3%.
Dhinaca kale waxaa hoos u dhac weyn ku yimid xisbiga weyn ee Social Demokraterna (S) oo Soomaalidu aad ugu codeyn jireen. Xisbigaan oo mudo badan ahaa xisbiga ugu weyn Sweden ayaa hada waxa uu haystaa 25.4% oo keliya halka xisbiga talada haya ee Moderaterna (M) ay haystaan 34.4%.
Waxaa sidoo kale dhabar jab ku yimid xisbiga cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna (SD) kuwaasoo hoos ugu dhacay 5.2%.
Hor u kaca ay sameeyeen xisbiga Miljöpartiet ayaa la dhihi karaa waa mid ka imaanaya dhowr dhinic oo ay ugu weyntahay hoos u dhaca ku yimid xisbiga SocialDemokraterna. Xisbiga Miljöpartiet ayaa sidoo kale doortay hogaan cusub sanadkaan. Xisbiga kale ee ay isku siyaasada yihiin ee Vänsterpartiet (V) ayaa isna la filayaa in uu kor u soo koco marka ay doortaan hogaan cusub bisha Janaayo.
Xisbiga Miljöpartiet ayaa ah mid siyaasadiisa ay u ku dhisantahay daryeelka deegaanka. Waxay sidoo kale ka mid yihiin xisbiga ugu soo dhaweynta fiican soo galootiga. Miljöpartiet ayaa ah xisbiga Dowlada ku saaraya cadaadiska in la mideeyo reeraha Soomaalida.
Si kastaba ha ahaatee, lama dhihi karo doorashada soo socota ee sanadka 2014 sidaan ayay natiijada noqon doontaa balse waxaa muuqata horumar joogto ah oo uu sameynayo xisbiga Miljpartiet.
asc dhamaan bahada somaliska waxaan umada somaliyeed kacodsanaa inta eey usuuragelee in eeycodkooda dhiibtaan waa in eey siiyaan xisbiga (Miljöpartiet) waa xisbi naga mudan hadaan nahay soomaali iyo dhamaan soogalootiga in aanweligeen siino codkeena
Deeq waan kugu raacsanahay inaan codkeena siino xisbigaan miljöpartiet, laakiin hal ha ilaawin in siyaasadu aysan saaxiib joogtaa lahayn balse ay dan joogtaa leedahay. Waxaan mar walba codkeena siin doonaa mar walba xisbiga aan danteena ka dhex aragno.
war 2014 ka hor muxuu qorshe ah uuhayaa xisbikaan soomalida jahilnimaa dilatay inkastuu dhaqdhhaqaaqwado war kii soomli uhayo waxqabad halataagayraanleeyahay balse yaana layska cararin dantuu iniinhayo uu soobandigo warhalays fahmo halayku xirnaado
adinga isbadeen maanta meeshaan aad joogtiin